Apple Music waxay dib u habeyn ku sameyneysaa waxyaabaha ku jira bogagga fannaaniinta | Wararka IPhone
Apple Music wuxuu dib u habeyn ku sameynayaa waxyaabaha laga heli karo bogga farshaxanleyda
Adeegyada ku jira muusikada qulqulaya ayaa isbeddelay sannadihii la soo dhaafay. Hadda iyagu waa hab waxtar leh oo lagu ilaalin karo xiriirka tooska ah ee u dhexeeya farshaxanleyda iyo taageerayaashooda, si ay ugu oggolaadaan waxyaabo gaar ah ama ay u soo sheegaan warar muhiim ah. Waxay sidoo kale hagaajiyeen qaabka waxyaabaha loo soo bandhigo si markaa ay ugu fududaato helitaanka waxa aan raadineyno.
Apple Music ayaa dib u habeyn ku sameeyay waxyaabaha laga heli karo bogga fanaaniinta si loo ilaaliyo qaab dhismeedka la taaban karo ee dhammaan qaybaha. In kasta oo bilawga dib-u-naqshaddani ay dhowdahay oo caalami ah, adeegsadayaal badan ayaan wali awoodin inay ku raaxaystaan ​​qalabkooda. Marka xigta waxaan kuu sheegeynaa dhammaan qaybaha laga heli karo isbeddelka qaabdhismeedka.
Apple Music waxay kala soocdaa waxyaabaha ku jira bogagga fanaaniinta
Ilaa cusbooneysiintan, Apple Music ma kala soocin EP, Singles iyo Albums. EPyadu waxay u shaqeynayeen sidii albumyo hal hees leh, taas oo ka dhigtay wax aan la fahmi karin oo aan la adkeyn karin si ay u maareeyaan waxyaabaha lagu soo dejiyey aaladahayaga. Wixii hadda ka dambeeya, iyadoo la cusbooneysiinayo nuxurka cusub ee adeegga muusikada ee Apple, ku dar qayb ka mid ah EP iyo Singles oo wuxuu ka saaraa qaybta albamka.
Wixii hada ka dambeeya qaybta Album-ka waxaan ka heli doonnaa oo kaliya albumyada dhabta ah, ka tagaya heesaha iyo kali kali ku yaal qayb cusub. Sidaas darteed, waxaan sifiican uheli karnaa waxa kujira anigoo horey u ogaanaya nooca muusikada aan raadineyno iyo qaabka loo daabacay.
Dib-u-qaabeynta waxa ku jira weli lama heli karo dhammaan aaladaha laakiin maalmaha soo socda waxay u muuqan doontaa sidii cusbooneysiintu u tahay mid caalami ah. Naqshadayntan ayaa u oggolaan doonta isticmaaleyaasha la kulan fanaaniinta cusub jaleec deg-deg ah leh EP-yada iyo, goor dambe, dhageysiga albamyada ku yaal qaybta u dhiganta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple Music wuxuu dib u habeyn ku sameynayaa waxyaabaha laga heli karo bogga farshaxanleyda
Sida loo arko toos u soo bandhigida Muhiimka ah ee iPhone Xs cusub Sebtember 12
Apple wuxuu ku darayaa 116 liis cusub 'Top 100' oo ku jira Apple Music